Halyayga Real Madrid Guti oo ka codsaday maamulka Los Blancos in ay u sabraan tababare Julen Lopetegui – Gool FM
Halyayga Real Madrid Guti oo ka codsaday maamulka Los Blancos in ay u sabraan tababare Julen Lopetegui
(Real Madrid) 08 Okt 2018. Halyayga kooxda Real Madrid ee Guti ayaa falanqeeyay xaalada adag ay haatan ku sugan tahay Los Blancos, wuxuuna maamulka ka codsaday in ay u sabraan tababare Julen Lopetegui.
Hadalka Guti ayaa wuxuu imaanayaa, kadib markii ay kooxda Real Madrid soo gashay xaalad adag mudada labadii isbuuc ee lasoo dhaafay.
“Dabcan waa inaad u dul qaadanaa tababare Julen Lopetegui, waa macalin weyn, waxaana taas cadeyn buuxda u ah wax qabadkiisa xulka qaranka Spain, wuxuuna markale ku muujin doonaa kooxda Real Madrid”.
Dhinaca kale arinta ku aadan xaalada ay haatan ku sugan tahay Real Madrid iyo in 4 kulan ay soo ciyaartay aysan gaarin wax guul ah ayuu Guti qiray inuusan la soconin xaalada kooxdiisa hore, sababa la xiriira inuu si xoogan u mashquulsanaa kulamada kooxda Beşiktaş.
DEG DEG: 5-kale oo u Sharaxan Ballon d'Or oo lagu dhawaaqay.....(Waa Shan Culus)
RASMI: Liiska 30-ka Xiddig ee ku tartamaya Ballon d'Or oo Dhammeystiran